शहर जान्नको लागि रोम जानु अघि हेर्नको लागि फिल्महरू | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | 26/04/2021 10:19 | अद्यावधिक गरियो 26/04/2021 10:23 | संस्कृति, सामान्य, इटाली
यदि तपाईं इटालीको बीचमा यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै शहरहरू जुन तपाईले देश मा हेर्न सक्नुहुन्छ, रोम सम्भवतः तपाईंको मार्गमा एक अनिवार्य स्टप हो। यदि तपाईं रोम जानु अघि फिल्महरू पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने, हामीले तपाईंलाई औंल्याउनु पर्ने पहिलो कुरा त्यो हो अनन्त शहर सिनेमाको संसारमा ठूलो सहभागिता रहेको छ। र यो टेपहरूमा यसको उत्पत्तिमा र यसको हालको कन्फिगरेसनमा दुबै सेट गर्दछ।
पहिलेको बारेमा, त्यहाँ पूरै फिल्म विधा पनि भयो जुन शास्त्रीय रोमलाई पुन: निर्माण गर्दछ: पेप्लम। र, दोस्रो को रूपमा, बाट इटालियन न्यूरोलिज्म को उद्योग गर्न हलिउड को राजधानी छनौट गरेको छ इटाली आफ्नो धेरै फिल्महरु को सेटिंग को रूप मा। तर, थप विज्ञापन बिना, हामी रोम जानु अघि तपाईं केही फिल्महरू देखाउन जाँदैछौं।
1 रोम जानु अघि हेर्नको लागि चलचित्रहरू: पेप्लमबाट आजको सिनेमा सम्म
1.2 'रोममा छुट्टीहरू'
1.3 'ला डोल्से भिटा', रोम जानु अघि हेर्नका लागि चलचित्रहरूका बीचमा अर्को क्लासिक
1.4 'प्रिय डायरी'
1.5 'रोम, खुला शहर'
1.6 'एक विशेष दिन'
1.7 'प्रेम संग रोममा'
1.8 'महान सुन्दरता'
1.9 'अकाटोन', उपनगरहरूको चित्र
रोम जानु अघि हेर्नको लागि चलचित्रहरू: पेप्लमबाट आजको सिनेमा सम्म
जस्तो कि हामीले तपाईंलाई भनेको थियौं, तपाईंले रोम जानु अघि देख्नु पर्ने फिल्महरूले शहरलाई एउटा सेटिंगको रूपमा लिन्छ। तर, साथै, तिनीहरू मध्ये धेरैले यो बनाउँछ एक अर्को चरित्र नायकको जीवनलाई प्रभाव पार्छ र निर्धारण गर्दछ। हामी यी चलचित्रहरू केही हेर्न जाँदैछौं।
'बेन-हूर' को लागी पोस्टर
यदि हामी पेप्लमको सिनेमाटोग्राफिक विधाको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं भने, यो हलिउड ब्लकबस्टर यसको उत्कृष्ट नमूनाहरू मध्ये एक हो। द्वारा निर्देशित विलियम वायलर र तारांकित चार्लटन हेस्टन, स्टीफन केटा, ज्याक हाकिन्स y Hara Harareet, द्वारा homonymous उपन्यास मा आधारित छ लुइस वालेस.
फिल्म हाम्रो युगको XNUMX० वर्षको यहूदियामा सुरु हुन्छ। कुलीन जुदा बेन-हूर तिनीमाथि रोमीहरू विरुद्ध अन्यायपूर्ण आरोप लगाइएको छ र जेलहरूमा सजाय सुनाइएको छ। येशू ख्रीष्टलाई भेटिसकेपछि र थुप्रै विकृतिहरू पार गरिसकेपछि नायक रोम आइपुगे र एक धनी मानिस र रथ दौडको प्रतिस्पर्धीमा परिणत भए। तर उसको एउटा मात्र लक्ष्य छ: आफ्नो पुरानो मित्र मेसालासँग बदला लिनु, जुन उनको आमा र बहिनीको कैदको लागि जिम्मेवार छ।
'बेन-हूर'को पन्ध्र मिलियन डलरको बजेट थियो, यो अहिलेसम्म चलचित्रको लागि सब भन्दा ठूलो हो। दुई सय भन्दा बढी कामदारहरूले यसको सजावटको निर्माणमा काम गरे, जसमा सयौं मूर्ति र फ्रेजहरू थिए। त्यस्तै गरी, सयौं सीमस्ट्रेसहरू पोशाक सिर्जनाको जिम्मामा थिए। Y रथ दौड दृश्य यो सिनेमाको इतिहासमा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ।
यो फिल्म न्यु योर्कमा नोभेम्बर १,, १ 18। York मा खुल्यो र 'गन विथ द दी दी' पछाडि अहिलेसम्म दोस्रो सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म भयो। जस्तो कि पर्याप्त थिएन भने, उनले प्राप्त गरे एघारौं ओस्कारसर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित। जे भए पनि, यो अझै पनि सिनेमाको इतिहासमा सबै भन्दा राम्रो चलचित्र मध्ये एक मानिन्छ।
प्लाजा डे एस्पाना, जहाँ 'रोमन हलिडेज'को सबैभन्दा प्रख्यात दृश्यहरू मध्ये एक चित्रित थियो
द्वारा निर्देशित अर्को फिल्म विलियम वायलरयद्यपि एकदम फरक विषयवस्तुको साथ, यो रोम जानु अघि हेर्नका लागि एक फिल्म पनि हो। यस अवस्थामा, यो एक रोमान्टिक कमेडी अभिनय हो अडिरी हेपर्न y ग्रेगरी प्याक। पहिलो हो अन्ना, एक राजकुमारी, जो उनको राजदूतबाट भागेर पछि, कुनै रोमनले जस्तै शहरमा दिन र रात बिताउँछिन्।
यो इटलीको राजधानी नजिकैको प्रसिद्ध सिनसिट्टा स्टुडियोमा शूट गरिएको थियो। सात एकेडेमी पुरस्कारका लागि नामित, उनले अविस्मरणीय अड्रेको लागि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित तीन जितिन्। त्यस्तै, सीडाहरूमा दुवै नायकहरूका साथ एक दृश्य स्पेन स्क्वायर वा मोटरसाइकल यात्रा को सिनेमा को इतिहास मा तल गएका छन्।
'ला डोल्से भिटा', रोम जानु अघि हेर्नका लागि चलचित्रहरूका बीचमा अर्को क्लासिक
'La डोल्से भिटा' को सब भन्दा प्रसिद्ध दृश्य
लिखित र द्वारा निर्देशित फेडरिको फेलिनी १ 1960 .० मा, यो पनि फिल्म इतिहास मा एक क्लासिक को रूप मा सर्वसम्मति सराहना गरिएको छ। यो वर्षको क्यान्स फिल्म फेस्टिवलमा यसको प्रीमियर गरियो र सम्मानित गरियो गोल्डन पामयद्यपि उनको ओस्कारमा कम भाग्य भएदेखि उनले उत्कृष्ट पोशाक डिजाइन मात्र प्राप्त गरे।
यसको नायक हो मार्सेलो मास्ट्रोइन्नी, अनिता एकबर्ग y एनुक एमी कथानकले धेरै स्वतन्त्र कथाहरू बताउँछ जसको साझा लि link्क रोमको शहर र यसको वरपरको शहर हो। यस अवस्थामा पनि तपाईं एक अविस्मरणीय दृश्य चिन्नुहुनेछ: दुबै नायकको नुहाउनेमा ट्रेवी फाउंटेन.
Nanny Moretti, 'प्रिय अखबार' का निर्देशक
आत्मकथात्मक फिल्म जसमा यसको निर्देशक र नायक, नानी मोरेट्टी, अनन्त शहर मा उसको अनुभव बताउँछ। यसले तीन स्वतन्त्र एपिसोडहरू समावेश गर्दछ र कागजातको साथ हास्य संयोजन गर्दछ। यो १ 1993 XNUMX in मा रिलिज भएको थियो र अर्को वर्ष यो प्राप्त भयो गोल्डन पाम कानमा र उत्कृष्ट निर्देशकको लागि पुरस्कार पनि।
धेरै राम्रोसँग परिचित दृश्यहरू छन् जसमा नायकले आफ्नो भेस्पाको पछाडि शहर घुम्छन् किन कि किन उनले छिमेकीहरूलाई मन पराउनुको कारणहरू वर्णन गर्दै। फ्लामीनियो पुल o गरबेटला। यदि तपाईं रोमको कम ज्ञात र मध्य क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई यो चलचित्र हेर्न सल्लाह दिन्छौं।
'रोम, खुला शहर'
'रोम, खुला शहर' को दृश्य
धेरै कम प्रकारको टोनको यो फिल्म छ रोबर्टो रोजेलिनी १ 1945 inXNUMX मा यसको प्रीमियर भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा सेट गरिएको यसले थुप्रै कथाहरू बताउँछ जसका नायकहरू नाजीहरूको बिरूद्धको प्रतिरोधसँग जोडिएका छन्।
यद्यपि मुख्य पात्रहरू मध्ये एक पादरी हो बुबा Pietro, जो जर्मनीले गोली हान्न समाप्त हुन्छ र यसको ट्रान्सक्रिप्ट हो लुइगी मोरोसिनी, एक धर्मगुरु जसले प्रतिरोधलाई सहयोग गरे र त्यसको लागि यातना दिए र मारिए।
त्यस्तै, को भूमिका पिना, एक महिला द्वारा खेलेको अना Magnani। यसको साथ, कलाकार Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Nando Bruno, Harry Feist र Giovanna Galletti हुन्। यो यस्तो क्रूड टेप हो कि यसले सेन्सरशीपमा पनि समस्याहरू खडा गर्‍यो। बदलामा, यो प्राप्त भयो गोल्डन पाम कान फिल्म फेस्टिवलमा।
'एक विशेष दिन'
मार्सेलो मास्ट्रोइन्नी, सोफिया लोरेनको साथ 'विशेष दिन' को स्टार
मार्सेलो मास्ट्रोइन्नी y सोफिया लोरेन तिनीहरूले धेरै चलचित्रहरूमा सँगै काम गरे, तर यो एक उत्तम हो। यो १ XNUMX s० को दशकमा स्थापना भएको छ, जब फासीवादको जोर्नी चलिरहेको थियो र त्यतिबेला इटालियन समाजको आलोचनात्मक पोर्ट्रेट गठन गरिएको थियो।
मस्ट्रोइन्नी एक रेडियो होस्ट खेल्छ समलि being्गीको रूपमा चलाइएको र लोरेन एक सरकारी अधिकारीसँग विवाहित महिलाको भूमिका खेल्छिन्। संयोगले भेटेपछि दुबै सम्बन्धमा प्रवेश गर्छन् किनकि उनीहरू दुवैले मे 1938, १ XNUMX XNUMX मा हिटलरको सम्मानमा परेडमा भाग लिएका छैनन्।
यस फिल्मका निर्देशक थिए इट्टोर स्कोला, जसले स्क्रिप्टमा सहयोग पनि गरे। जिज्ञासाको रूपमा, उनले फिल्ममा सहयोगी भूमिका खेल्छन् एलेसान्ड्रा मुसोलिनी, फासिस्ट तानाशाहको नाती। व्यापक रूपमा सम्मानित, यसले दुई ऑस्कर नामांकनहरू प्राप्त गर्‍यो: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता र सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म, यद्यपि यसले अन्तत: कुनै पनि जितेन।
'प्रेम संग रोममा'
रोबर्टो बेनिग्नी, 'A रोमा कोन आमोर' को एक मुख्य पात्र
हालसालै यो फिल्म द्वारा निर्देशित छ वुडी एलनजुन २०१२ मा रिलीज भएको थियो। यो एक रोमान्टिक हास्य हो जसले चार कथाहरू बताउँछ जसमा सबैले ईटरनल सिटी को सेटिंग को रूप मा छन् र निजी पूर्ति र प्रसिद्धि को विषयवस्तुमा केन्द्रित छन्। नायकहरू मध्ये एक, जेरी नाम गरेको संगीत निर्माता, एलेन आफैंले खेल्छन्।
अन्य ज्याक हुन्, एक वास्तुकलाका विद्यार्थीले खेलेको जेसी इइसेनबर्ग; लिओपोल्डो, एक अज्ञात व्यक्ति जो अचानक मिडिया फोकस हुन्छ र जसले मूर्ति बनाउँछ रोबर्टो बेनिग्नी, र एन्टोनियो, एक भूमिका उसले निभाउँछ Alessandro tiberi। तिनीहरूसँगै पेनेलोप क्रुज, फेबियो आर्मिलाटो, एन्टोनियो अल्बानीज र ओर्नेला मुति देखा पर्दछन्।
टोनी सर्वोल्लो, 'महान सुन्दरता' को स्टार
अघिल्लोसँग समकालीन, जुन २०१ 2013 मा रिलीज गरिएको थियो, यो फिल्म निर्देशित छ पालो Sorrentino, जसले स्क्रिप्ट पनि सँगै लेख्यो उम्बर्टो कोन्टेरेलो। र यसले शिष्टाचारको पनि एक बिन्दु छ।
फेरागोस्तोले निराश रोममा निराश पत्रकार र लेखक Jep Gambardella यो उच्च सामाजिक क्षेत्रका बिभिन्न प्रतिनिधि पात्रहरूसँग सम्बन्धित छ। प्रिलेजहरू, राजनीतिज्ञहरू, सेतो कलर अपराधीहरू, अभिनेताहरू र अन्य व्यक्तिहरूले यो षडयंत्र बनाउँछन् जुन भव्य महलहरू र भव्य भिलाहरूमा हुन्छ।
चलचित्र ताराहरू टोनी सर्वोल्लो, कार्लो भेर्डोन, साब्रिना फेरीली, Galatea ranzi y Carlo Buccirosso, अन्य दोभाषे बीचमा। २०१ In मा उनी लाई सम्मानित गरियो गोल्डन पाम क्यान्स र, यसको केही समय पछि ऑस्कर सबै भन्दा राम्रो विदेशी भाषा फिल्म को लागी। तर सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यो 'ला डोलसे भिटा' को प्लटको अपडेट हो जुन हामी तपाईंलाई पहिल्यै बताइसकेका छौं।
'अकाटोन', उपनगरहरूको चित्र
पियर पाओलो पासोलिनी, 'अकाटोन' का निर्देशक
फिलिमहरूको सूचीमा रोम जानु अघि हेर्नको लागि यो एउटा निर्देशित छैन पियर पाओलो पासोलिनी, एक बुद्धिजीवी जो राम्रोसँग शाश्वत शहरको सारलाई कसरी कब्जा गर्ने जान्दछन्, यो सत्य हो कि उहाँ आफ्नो विचित्र दृष्टिकोणबाट हटाइनुभयो।
हामी तपाईलाई धेरै टेपहरूको बारेमा बताउन सक्दछौं, तर हामीले यो छनौट गर्नुभयो किनकि यो सीमान्त रोमको चित्र हो। अकाटोन उपनगरीय शहरहरूबाट आएको दलाल हो जसले अनिकाल बन्द गर्दैन, आफ्ना साथीहरूको समूहलाई जस्तै। काम गर्नु अघि केहि गर्न सक्षम, उहाँ बताउनुहुन्छ र शोषण गर्न नयाँ महिला खोज्नुहुन्छ।
तपाईंले प्लटबाट देख्न सक्नुहुनेछ, यो गत शताब्दीका पचासको दशकको रोमन अण्डरवर्ल्डको क्रूर चित्र हो। बाट पिउनुहोस् इटालियन न्यूरोलिज्म र व्याख्या गरिएको छ फ्रान्को सिटी, सिल्वाना कोर्सिनी, फ्रान्का पासुत y पाओला गुइडी अन्य दोभाषे बीचमा। एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाईंलाई त्यो बताउँछौं Bernardo Bertolucci उनले फिल्ममा एक सहायक निर्देशकको रूपमा काम गरे।
अन्तमा, हामीले तपाईंलाई केहि देखाइदियौं रोम जानु भन्दा पहिले हेर्नको लागि फिल्महरू। तिनीहरू सबैको प्रतिनिधिमूलक अंश हुन् कि ईन्टर्नल सिटी एक मंचको रूपमा वा अझ एक मुख्य पात्रको रूपमा। वास्तवमा हामी अरूलाई मनपराउन सक्छौं 'एन्जिल्स र डेमेन'ग्रेगरी विडेन द्वारा; 'क्याबिरियाका रातहरू'फेडरिको फेलिनी द्वारा; 'ब्यूटीफुल'लुचिनो भिस्कोन्टी वा द्वारा 'खाऊ प्रार्थना प्रेम'र्यान मर्फी द्वारा।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » रोम जानु अघि9वटा चलचित्रहरू